Banyere Anyị - Shijiazhuang Ruo Mgbe Ebighị Ebi Bright Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Ruo Mgbe Ebighị Ebi Bright Trading Co., LTD bụ ọkachamara na oru oma soplaya maka iche iche iche iche nke waterproof ngwaahịa karịa afọ 10. Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'ichepụta, na-arụ ọrụ ma na-eweta ụdị mmiri ozuzo niile. Anyị nwere ike ịnye Men Raincoat, Ladies Raincoat, Rainmụaka Raincoat, Men Jacket, Windbreaker, PVC Raincoat, EVA Rainwear, Pee Rain Poncho, Uwe mkpuchi, Uwe nchekwa wdg. . Anyị zuru okè ngwaahịa na-abịa nke ukwuu irè otu, na-agwụ ike management usoro na isiike na-achụso mmụọ nke àgwà. Anyị na ngwaahịa na-ebe-ghọtara na tụkwasịrị obi site ọrụ na ike izute nọgidere na-agbanwe akụ na ụba na-elekọta mmadụ mkpa. Ndị ahịa mbụ anyị ka na-arụrụ anyị ọrụ! Anyị na-enye ọrụ kacha mma ma jiri nlezianya na-achịkwa àgwà ahụ! Anyị na-eto eto ọnụ! Anyị kwa afọ ahịa ntụgharị ugbu a ruru USD2,000,000, Anyị isi ahịa na-agụnye Europe, North na South America, Africa, na Asia ...
Ewezuga ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri ozuzo, anyị ka nwere ụlọ obibi akwụkwọ nke anyị. Printinglọ obibi akwụkwọ anyị dị na obodo Shijiazhuang, mpaghara Hebei. Anyị nwere ihe karịrị 50sets igwe na-ekpo ọkụ ọkụ, 10sets meshrịị mbipụta ahịrị na 8sets igwe mbufe ọkụ. Anyị na-ahụmahụ na-ebi akwụkwọ, anyị nwere ike ibipụta ụdị ọ bụla nke ihe onwunwe dị ka Polyester, naịlọn, ịkwanyere, EVA, Pee, Pu, TPU wdg Anyị nwere ike ibi akwụkwọ ọ bụla di iche iche nke na-ebi akwụkwọ imewe gụnyere ntupu-ebi akwụkwọ, CMYK obibi, okpomọkụ nyefe-ebi akwụkwọ, echiche ebi akwụkwọ, gbanwere agba agba na ibi akwụkwọ 3D.
Anyị na-eji ezigbo ohere ịmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile. Na nke a, anyị na-eme ike anyị niile site na mkpebi anyị na ike anyị. Ebumnuche anyị bụ nchekwa, oke dị elu na ogo kacha elu. Nabata ịkpọtụrụ anyị maka azụmahịa n'ọdịnihu, anyị ga-akwụghachi gị ọrụ kachasị mma na ngwaahịa kachasị mma.
Shijiazhuang Ruo Mgbe Ebighị Ebi Bright Trading Co., Ltd.
Peva Raincoat, Ịkwanyere Poncho, Comụ nwanyị na-ekpuchi mmiri ozuzo, Pvc Raincoat, Pumụaka Pu Raincoat, Pu Raincoat,